ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဘာမှားနေလဲ”
Straitstimes ကနာမည်တူလို့ ပုံမှားတာတော့ထားပာတော့။ တို့ ဧရာဝတီ ကြီးမှားတာကတော့ ...
U Nyan Win Photo
၀ါးးးးးးးးးးးး Straits times ကမှားတာက မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နာမည်တူလို့ပဲ ရောသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဧရာဝတီ ကတော့း(
har har.. this is political website.
အဲလိုပဲဗျ၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၀က်ဆိုဒ်မှာတောင်
သခင်စိုးနာမည်နဲ့ သခင်သန်းထွန်းဓါတ်ပုံကြီး တင်ထား
အင်း သေချာစဉ်းစားကြည့် ရင် တမင်သက်သက် ညဏ်ဝင်း ပြုတ်အောင် ပညာသားပါပါ လုပ်ကြံပုံ ရနေတယ်
Let me suggest you listen to VOA interview to Prof. Joseph Silverstein on 31st 9pm program. It's encouraging to hear the comments of suchadistinguished Scholar who has long been studying Burmese politics. He's so sharp and clear now. And let us hear your opinion regarding the interview.
ကျေးဇူးပါပဲ။ သွားနားထောင်ပြီးပါပြီ။ ကျနော့်အမြင်ကလည်း ကိုကျော်ထင်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။
ငပေါကတော့ ခေါင်းကြီးပိုင်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ..... ဟောင်လွန်းတယ်.....
သံရုံးတလပိတ်လို့ ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ ကိစများ.... တခွန်းတောင် မဟပါလားကွာ.... မင်းအော်ပုံနဲ့ဆို သံရုံးက နဲနဲတော့ အီးလှည့်ပေါက်ပြမှာပါ... လုပ်စမ်းပါဦး.....
မင်းက သမ္မတလောက်မှ စိတ်ဝင်စားတာကိုး.... ဒီမှာ WP တွေ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မင်းသိပုံမပေါ်ပါဘူး.....
ဟေ့ကောင် သူတို့က ပိတ်တဲ့ တလအတွင်းမှာ ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ် တာဝန်မယူဘူးဆိုတဲ့ စကားရယ်..... ပိတ်ရက် အတွင်း..... အစားထိုးနေရာမရှိတာရယ်.....
ပိတ်တော့မှာမို့လို့ အသေအလဲ သွားတန်းစီရတဲ့ ဒုက္ခတွေရယ်.... အလုပ်ခွင်ကလွဲလို့ ဘယ်မှ ထွက်မရလို့.... သူတို့ နိုတစ်ဘုတ်လောက်မှာ သာ ကြေငြာခဲ့လို့ သတင်း မရလို့ သက်တမ်းမတိုးလိုက်ရတာတွေကြောင့် နစ်နာတာတွေ မင်းသိရဲ့လား..... အာဂလောင် ငပေါရေ.....
သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွေချည်းပဲ တနေ့တနေ့ ကော်ဖီလေးဇိမ်ခံသောက်ပြီး..... ဖတ်ပြီးလေကျယ်မနေနဲ့....
လူမသိသူမသိ ခံစာနေရတဲ့ တကယ့်ဘ၀တွေကို အရင် သေချာလေ့လာပါဦး.... သမ္မတလောင်းကြီး.... ပြောရဲဆိုရဲ အရှင်သခင်... ရဲရဲတောင် သတ်တိဂဲကြီး ငပေါရေ.... အားကိုးပါရစေ....
no no.. nga paw is not interested in these things.. as long as he can stay in PAP subsidized HDB and talk abt getting democracy (he don't know wat is democracy), he feel top of the world.
စကားထဲက စိတ်ဓါတ်တွေ.. ဇာတိတွေပြနေတယ်
အားအားယားယား ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှမလုပ်နိုင် အချင်းချင်းလည်း မိန်းမတွေလို အပြစ်ရှာ မကောင်းထိုင်ပြောနေတာတော့ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း ဘလော့ဂါတွေပဲ